သံလွင်: ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီးတွင် လက်ပြတ်သူများ ပြန်ဆက်ရေး တာဝန်ယူ ကုသပေးနေ
ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီးတွင် လက်ပြတ်သူများ ပြန်ဆက်ရေး တာဝန်ယူ ကုသပေးနေ
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လက်ပြတ်ခဲ့သည့်လူနာများကိုရန်ကုန်ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးတွင် အောင်မြင်စွာ တာဝန်ယူ ခွဲစိတ်ကုသ ပေး နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။ ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူရာ တွင် ငွေကြေးကုန်ကျခံစရာမလိုဘဲ အခမဲ့ခွဲစိတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုနှစ်မှ စတင်၍ လက်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်များကို ၂၄ နာရီလုံး တာဝန်ချထားပေးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်ပြည်သူ့ ဆေး ရုံကြီး လက်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကု ဌာနမှူး ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ခင်မောင်မြင့်က မေ ၁၉ ရက် က ကျင်းပ သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားသည်။
ဒေါက်တာ ခင်မောင်မြင့်က“လက်ပြတ်တဲ့ လူနာတွေအတွက် ကျနော်တို့ပြန်ဆက် နိုင်ပါပြီ။ တခြားနေ ရာတွေမှာလည်း လုပ်နိုင် အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်”ဟုလည်း ပြောသည်။
ပြတ်သည့်လက်ကို အေးစက် ခြောက်သွေ့နေစေရေးအတွက် ရေခဲထဲတွင် အိတ်ခံ၍ ထုပ်ပိုးရန်လိုအပ်ပြီး အအေးဓာတ်မရှိပါက အသားစများ ပုပ်ဆွေးနိုင်ကြောင်း၊ ရေများ စိုစွတ်နေပါကလည်း အကြောများဆက် ရာတွင် အခက်အခဲရှိကြောင်း၊ ၆ နာရီထက် နောက်မကျဘဲ တတ်နိုင်သမျှ စောစောလာရောက်ရန် လည်း ဒေါက်တာ ခင်မောင်မြင့်က ပြောဆိုသည်။
လတ်တလော လက်ပြန်ဆက်ပေးသည့် ခွဲစိတ်ကုသမှုကို ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင်သာ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး အခြားသောမြို့များတွင်ပါ ခွဲစိတ် ကုသနိုင်ရေး ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်၍ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အဆင့်မြှင့်တိုးချဲ့မှုများကိုလည်း လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာ လှမြင့်က ပြော သည်။
ရန်ကုန် ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ ဇော်ဝေစိုးကလည်း“အခုဒီမှာက သွေးစစ် တာတောင် နိုင်ငံခြားသွားစစ် နေ ရတာ ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်၊ ဒီမှာတင် မှန်အောင်စစ်လို့ရပါတယ်၊ ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေ မွေးထုတ်နိုင်ဖို့ လုပ်ရပါမယ်”ဟု ပြော ဆို သည်။
လတ်တလော ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် အရိုးအကြော ခွဲစိတ်ကုသမှုများ နေ့စဉ်ပြုလုပ်လျက်ရှိရာ အရိုး အကြောထိခိုက်သည့် လူနာ သုံးပုံ တပုံခန့်သည် လက်နှင့်ပတ်သက်သူများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဆေးရုံကြီး တာဝန်ရှိသူများအနေနှင့် ဘယ်လက်မောင်းပြတ်ခဲ့သော တိုက်ကြီးမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သည့် အမျိုးသမီး တဦးကို ဧပြီ ၂၇ ရက်က ခွဲစိတ်ကုသမှု အောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ သတင်းမီဒီယာတွင် ထုတ်ဖော်ကြေညာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ် က လည်း လက်မောင်းပြတ်ခဲ့သည့် အမျိုးသမီးတဦးကို ခွဲစိတ်ကုသမှု အောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။
တိုက်ကြီးမြို့နယ်မှ လက်မောင်ပြန်ဆက်ထားသည့် လူနာသည်လည်း အနာကျက်ပြီဖြစ်၍ ဆေးရုံမှပြန် ဆင်းတော့မည်ဖြစ်ပြီး အာရုံကြော ထိထားသည့်အတွက် ပုံမှန်အတိုင်းပြန်လှုပ်ရှားနိုင်ရန် ၈ လမှ ၁ နှစ်၂ လ အထိ ကြာနိုင်ပြီး လက်ကောက်ဝတ် ထိခိုက်သူများသည် ယခုထက်ပို၍ မြန်ဆန်စွာ ပုံမှန်အတိုင်းပြန် လှုပ်ရှားနိုင်ကြောင်း ဒေါက်တာ ခင်မောင်မြင့်က ရှင်းပြသွားသည်။
at 5/20/2015 03:56:00 PM
VOA News: သတင်း
SpaceX Astronauts Welcomed Aboard International Space Station -  The mission to the station is the first foraprivate company
တပျကုနျးမွို့နယျမှာ Sino Truck ယာဉျ ဟိုကျဒရောလဈလနျပွီး မုချဦးကို ဝငျရောကျတိုကျမိလို့ ၄ ဦးသေ၊ ၂ ဦးဒဏျရာရရှိ - (Unicode)⤵⤵⤵ နပွေညျတျော၊ တပျကုနျးမွို့နယျ၊ ခငျြးစုကြေးရှာထိပျမှာ မလေ ၂၇ ရကျနေ့ ည ၉ နာရီ အခြိနျက Sino Truck ယာဉျရဲ့ ဟိုကျဒရောလဈ လနျပွီး မုချဦးကို ဝငျရောကျ...
လူနာအမှတျ ၁၈၉ ကို ဒုတိယအကွိမျဓာတျခှဲစဈဆေး၊ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါပိုးမတှေ့ - မကှေးတိုငျး၊ သငျကွားရေးဆေးရုံကွီးမှာ ကုသပေးနတေဲ့ မလေးရှားပွနျ လူနာအမှတျ ၁၈၉ ကို မေ ၃၁ ရကျနကေ့[...] The post လူနာအမှတျ ၁၈၉ ကို ဒုတိယအကွိမျဓာတျခှဲစဈဆေး၊ က...
ကမ်ဘာ့စံနှုနျးတှနေဲ့မညီတဲ့ Facebook ရဲ့ လုပျဆောငျမှုက တရားမြှတတဲ့ရှေးကောကျပှဲဖွဈဖို့ စိုးရိမျနရေပွီလား - [Zawgyi] ဖြိုးဝေ EMG7May 2020 (၁) မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုံးစွဲလာကြပြီး Facebook မှာ ဝေဖန်ထောက်ပြမှ အလုပ်လုပ်ကြတဲ့အစိုးရဆိုပြီး ဝေဖန်သုံ...
သမ္မတနှင့် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ပြိုင်မည် - [image: နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ်] နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဥ...
Narinjara News Burmese Online 24 X 7
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် နွားရုံတောင်နယ်ခြားစောင့်စခန်း အဆောင်တစ်ချို့မီးလောင်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ စခန်းကို စွန့်ခွာဟုဆို - နိရဉ္စရာ၊ ဧပြီလ ၁၂/ ၂၀၁၉ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်း၊ နွားရုံတောင် နယ်ခြားစောင့်ကင်းစခန်းမှ အဆောင်တစ်ချို့မီးလောင်နေပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များလ...
- အမေ့သမီးတွေနဲ့ အတူ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD နဲ့ အတူရှိနေကြမယ် photo credit Eleven Media Group
" မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကဏ္ဍ ၇ခုအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံက အကူအညီပေးမည်ဟု ဆို " - အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရေး ၊ ဘဏ္ဍာရေး ၊ ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍတို့တွင် ဂျပန်က ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု ယနေ့(...
The Irrawaddy's Blog
ကမ္ဘာ့အလှမယ်စင်မြင့်ဆီသို့ ပထမဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့ ရခိုင်ရိုးရာအလှတရားများ - ဒါဟာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ရိုးရာအလှတရားကို ကမ္ဘာ့စင်မြင့်ထက်မှာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကိုယ်စားပြုဖော်ထုတ်ပြမှာ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် - http://goo.gl...
- *A Father's Tear (အဖေ့မျက်ရည်) * လူတစ်ယောက်မိခင်များနေ့မှာနှင်းဆီပန်းလေးတွေကိုဖဲကြိုးလှလှလေးတွနဲ့ စည်းပြီးဈေးအ၀မှာသွား...
Thanks: Free Image Upload, ฟุตบอล
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် VOA တွေ့ဆုံမှု
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမေရိကန်ခရီးစဉ် စတင်
မုံရွာ-ဆားလင်းကြီးတွင် ဆန္ဒပြနေမှုအပေါ် ပြောကြားထားသော ကိုဟန်ဝင်းအောင်၏ ပန်ကြားချက်
၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများ
Yangon Weather from Yahoo! Weather
► 2020 (1117)
► 03/01 - 03/08 (96)
► 02/16 - 02/23 (90)
► 02/09 - 02/16 (80)
► 02/02 - 02/09 (85)
► 01/26 - 02/02 (101)
► 01/19 - 01/26 (187)
► 01/12 - 01/19 (124)
► 01/05 - 01/12 (107)
► 2019 (821)
► 12/22 - 12/29 (62)
► 12/15 - 12/22 (101)
► 12/08 - 12/15 (94)
► 12/01 - 12/08 (31)
► 11/24 - 12/01 (57)
► 09/22 - 09/29 (45)
► 09/15 - 09/22 (75)
► 09/08 - 09/15 (59)
► 09/01 - 09/08 (69)
► 2016 (879)
► 04/03 - 04/10 (93)
► 03/20 - 03/27 (64)
► 03/06 - 03/13 (33)
► 02/21 - 02/28 (51)
► 02/14 - 02/21 (54)
► 01/31 - 02/07 (89)
► 01/24 - 01/31 (90)
► 01/17 - 01/24 (58)
► 01/03 - 01/10 (53)
▼ 2015 (5549)
► 12/27 - 01/03 (73)
► 12/20 - 12/27 (63)
► 12/13 - 12/20 (98)
► 12/06 - 12/13 (96)
► 11/29 - 12/06 (109)
► 11/22 - 11/29 (85)
► 11/15 - 11/22 (121)
► 11/08 - 11/15 (63)
► 11/01 - 11/08 (80)
► 10/11 - 10/18 (93)
► 10/04 - 10/11 (146)
► 09/27 - 10/04 (135)
► 09/20 - 09/27 (110)
► 09/13 - 09/20 (85)
► 09/06 - 09/13 (175)
► 08/30 - 09/06 (75)
► 08/23 - 08/30 (123)
► 08/16 - 08/23 (132)
► 08/09 - 08/16 (146)
► 08/02 - 08/09 (99)
► 07/26 - 08/02 (99)
► 07/19 - 07/26 (121)
► 07/12 - 07/19 (110)
► 07/05 - 07/12 (85)
► 06/28 - 07/05 (112)
► 06/21 - 06/28 (72)
► 06/07 - 06/14 (145)
► 05/24 - 05/31 (112)
▼ 05/17 - 05/24 (121)
အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေရေးဆွဲရာတွင် မည်သူ့ကိုမျှ သဘောက...
ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်များနေထိုင်ရန် အင်ဒိုနီးရှားက ကျွန်းတ...
မန်စီတိုက်ပွဲကိစ္စ ကေအိုင်အေနှင့် အစိုးရ အရေးပေါ်တွေ...
မူလတန်းကျောင်းသား ၅ သန်းကျော်ကို ကျောင်းဝတ်စုံ အခမ...
ထိုင်းစစ်တပ် အာဏာလက်လွှတ်ဦးမည်မဟုတ်ဟု နိုင်ငံရေးအက...
ဆီးရီးယား ရှေးဟောင်းမြို့ အိုင်အက်စ်လက်ထဲ အလုံးစုံ...
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်မှ ထွက်ခွာလာသော ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်...
“ဝ” တို့၏ လျှို့ဝှက်ပန်းခြံ
NCCT အစည်းအဝေးများနှင့် ပတ်သက်သည့် အပြီးသတ် အစီရင်...
လှေစီးဒုက္ခသည်အများစု မြန်မာပြည်က မဟုတ်ဟု ဒုသမ္မတ ယတ...
အိုင်အက်စ်သိမ်းပိုက်ခံ ရာမာဒီစစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ ဘဂ...
နှလုံးသား ထောင့်ကြားမှ သံယောဇဉ်စများ
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင် ဘယ်သူလဲဆ...
နျူကလီးယားကိစ္စ စုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့် မပြုဟု အီရန်အကြီ...
တောင်ကိုရီးယားတွင် မားစ်ရောဂါကူးစက်ခံရသူ ၃ ဦး တွေ...
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှ တာဝန်ခံထားသည့် လယ်မြေများ ပြန်မ...
လူမှောင်ခို စက်လှေထဲ အကြမ်းဖက်သမားတွေ ရောပါနိုင်
လှေစီးပြေး ဒုက္ခသည်တွေ သြစတေးလျ လက်ခံမည်မဟုတ်
Syria ပိုင်နောက်ဆုံး Iraq နယ်စပ်ဂိတ် IS သိမ်းပိုက်...
မြန်မာကို အမေရိကန် ဆက်လက် ကူညီမည်
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲပြီးလျှင် တိုင်ကြားမှု များပြားနို...
လှေဖြင့်ရွှေ့ပြောင်းနေသည့် ဒုက္ခသည်များအရေး အပါအ၀င် ...
ညှို့ငင်ရမယ့် ဇာတ်ရုပ်ကိုသရုပ်ဆောင်ဖို့ စိုးရိမ်နေ...
လှေစီးဒုက္ခသည်အားလုံး မြန်မာနိုင်ငံမှ ဖြစ်ကြောင်ြးေ...
လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်စွန့်ရန် ဆွေးနွေးဖူးခြင်းမရှိဟု ...
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် နိုင်သူအကုန်ယူစနစ်တမျိုးထဲ သ...
၂၉ ကြိမ်မြောက် ထိုင်းမြန်မာနယ်ခြားကော်မတီအစည်းအဝေး...
ကချင်စစ်ပွဲ ၄ နှစ်ပြည့် ကမ္ဘာတ၀န်း ကျင်းပမည်
ဘန်ကီမွန်း ၂ နှစ်ငံ ပူးတွဲစက်မှုဇုန်ခရီးစဉ် မြောက်က...
အရေးပေါ်စီမံမှုအက်ဥပဒေ ဖျက်သိမ်းရန်အဆို ရှုံးနိမ့်
လှေစီးဒုက္ခသည်များအရေး ၃ နိုင်ငံ ဆွေးနွေး
သမ္မတ၏ အနီးကပ်လုံခြုံရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အစာအိမ်ရော...
ကျောင်းသားသပိတ်ကြောင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသူများ လွတ်မြေ...
လှေစီးသွားသူများထဲတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် ဒုက္ခသည်စခန်းမ...
ဗြိတိသျှစစ်တပ်နှင့် နိုင်ငံရေးလောကမှ သမိုင်းမြှုပ်...
''ပုဒ်မ၅၉(စ)သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဦးတည်ရေးဆွဲ...
လှေစီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၁၁ ဦး နယ်စပ်တွင် ဖမ်းမိပြီးနေ...
မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နယ်စပ် တာဝန်ရှိသူများတွေ့ဆ...
ကိုးကန့်ပြီးရင် ‘၀’ အလှည့်လား
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့သမိုင်းကို ရ...
ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အောင်ဆန်း နဲ့ စုကြည် လို့ခွဲသိဖို့...
လှေစီးဒုက္ခသည် ဘင်္ဂါလီများကို နိုင်ငံသားအဖြစ် လက်ခံသ...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ အသုံးပြုပြီး ပြည်ခိုင်ဖြိုး...
တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များ လက်နက်စွန့်ရေး ကာကွယ်ရေးဦး...
ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီးတွင် လက်ပြတ်သူများ ပြန်ဆက်ရေး တာ...
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်မရအောင် တင်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်ဟု ဦးရွှေမ...
လှေစီးဒုက္ခသည်တွေကို ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ ဂမ္ဘီးယားနိုင်ငံ ...
ပင်လယ်ပြင်မှာ လှေစီးဒုက္ခသည် ၂ဝဝဝ ရှိလို့ ကုလပြောကြ...
ခြသေ့င်္ပါတီ နောက်တစ်ချီ အာဏာရခဲ့သော်
ခြောက်ပွင့်ဆိုင် ထပ်မံတွေ့ဆုံရေး အစိုးရ တက်ကြွစွာ ...
ဘင်္ဂါလီများအရေးကို နုတ်ဆိတ်နေသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည...
ထိုင်း၊အင်ဒိုနဲ့ မလေးတို့ ရိုဟင်ဂျာအရေး ဒီကနေ့ ဆွေ...
လူကုန်ကူးသူကို ရေတပ်က နှိမ်နင်းဖို့ အီးယူခွင့်ပြု...
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ထိပ်သီးညီလာခံ KNU နယ်မြေမ...
၂၀၁၄ အကယ်ဒမီစာရင်းတွင် ဇာတ်ကား ၁၇ ကား စာရင်းဝင်
‘‘သမိုင်းတွင်မယ့် လုပ်ငန်းကြီးကို ပေါ့ပေါ့ဆဆ ပြီးစ...
ကချင်ပြည်နယ်ရှိ မဲဆန္ဒနယ်အားလုံးတွင် ရွေးကောက်ပွဲကျ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပူတာအိုမြို့တွင် လူထုဟောပြောပွဲ...
(ဘက)ပညာရေး အဆင့်မြှင့်ဖို့ ဆရာတော်များ ညီလာခံကျင်း...
ကျောင်းသားသပိတ် ထောက်ခံသူ နည်းပြဆရာ တရားစွဲခံရ
၆ ပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ဖို...
NCA လက်မှတ်ထိုးရန် အစိုးရ အသင့်ရှိကြောင်း သမ္မတ ဦး...
ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲ ၂ ကြိမ် ပေးပါက ထောင်ဒဏ် ငွေဒဏ်...
အနုပညာ ဆည်းဆာရိပ် ဘိုးဘွားရိပ်သာ တည်ထောင်မည်
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ထိပ်သီးညီလာခံ၌ မဟာမိတ် ၃...
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် Kaesong စက်မှုဇုန်သွားမည...
ပလောင်နဲ့ မြန်မာအစိုးရတပ် တိုက်ပွဲများ ဆက်ရှိနေ
ရုရှားနစ်မြုပ်သင်္ဘော သေဆုံးသူ မြန်မာ ၁၄ ဦးအတွက် အသ...
ခြောက်ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲ ထပ်မံပြုလုပ်ရန် တက်တက်...
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည...
ရွေးကောက်ပွဲ တွင်သုံးမည့် မဲပုံးများကို ကုတ်နံပါတ်...
ငါးထောင်တန် အသစ်၏ ရေစာနှင့် ကြိုးများကြောင့် ဘဏ်အခ...
ဒေါ်စု မွန်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်အပေါ် ဒေါက်တာရန်မျိုးသိမ်းသ...
ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်အနားယူမည့် အကြောင်းကြားစာ သမ္မ...
ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲတွင် မြန်မာအသင်း အိမ်ကွင်းအဖြစ် ...
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ယင်လပ် တရားရုံးတွင် တာဝန်...
လှေစီးဒုက္ခသည်များကို ပင်လယ်ထဲ ပြန်သွားရန်ဖိအားပေးသ...
လိပ်ကျွန်းအမှု တရားခံ မြန်မာ ၂ ဦး လွတ်မြောက်နိုင် ...
Gen Wave အဖွဲ့မှ ကိုမိုဃ်းသွေး ပုဒ်မ ၁၈ နဲ့ အမှုဖွင...
ဂျာမန်ကုမ္ပဏီများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပိုမို ရင်းနှီး...
၀ှိုက်ကဒ်တွေ မဲပေးခွင့် မရှိကြောင်း ပြင်ဆင်တဲ့ ဥပဒေ...
လှေစီးဒုက္ခသည်အရေး မြန်မာအစိုးရ ရပ်တည်ချက်
လူကုန်ကူးမှု တားဆီးကာကွယ်ရေး ဥပဒေ ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒြေ...
ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သောအမိန့် ဆက်လက် အတည်ဖြစ်ကြောင်...
လွှတ်တော်က တာဝန်ပေးပါက ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲ လုပ...
ကန် - မြန်မာ ဆက်ဆံရေး ညီလာခံ ကျင်းပမည်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်...
အီဂျစ်သမ္မတဟောင်းမော်စီနှင့် အပေါင်းအပါများ သေဒဏ်ချ...
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခု ဖြစ်...
TNLA က ကားများကိုဆက်ကြေးကောက်ခံ၍ တပ်မတော်နှင့်တိုက...
အစိုးရသစ်အနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံ မ...
လွတ်လပ်မျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရန် အစွမ်းကုန် ဆော...
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နိုင်ငံရေးပါတီများနှင...
လူ့ဘောင်သစ်ပါတီ တော်တော်လေး ပြန်ရုန်းကန်ရမယ်
လူငယ်တွေအတွက် ရွေးကောက်ပွဲက ဘယ်လောက်ထိ အရေးကြီးလဲ
တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယ (သို့မဟုတ်) နောက်ကျော မလုံတဲ့ မိတ်...
ထိုင်းနိုင်ငံ စမွတ်ပကန်ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင...
► 05/10 - 05/17 (122)
► 05/03 - 05/10 (122)
► 04/26 - 05/03 (123)
► 04/19 - 04/26 (85)
► 04/05 - 04/12 (133)
► 03/29 - 04/05 (120)
► 03/22 - 03/29 (50)
► 03/15 - 03/22 (129)
► 03/08 - 03/15 (103)
► 02/22 - 03/01 (112)
► 02/15 - 02/22 (129)
► 02/08 - 02/15 (133)
► 02/01 - 02/08 (149)
► 01/25 - 02/01 (131)
► 01/18 - 01/25 (136)
► 01/04 - 01/11 (119)
► 2014 (6437)
► 12/28 - 01/04 (116)
► 12/14 - 12/21 (67)
► 12/07 - 12/14 (118)
► 11/30 - 12/07 (162)
► 11/23 - 11/30 (146)
► 11/16 - 11/23 (183)
► 11/09 - 11/16 (117)
► 11/02 - 11/09 (155)
► 10/19 - 10/26 (105)
► 10/12 - 10/19 (157)
► 10/05 - 10/12 (100)
► 09/28 - 10/05 (167)
► 09/21 - 09/28 (193)
► 09/14 - 09/21 (153)
► 09/07 - 09/14 (169)
► 08/31 - 09/07 (153)
► 08/24 - 08/31 (150)
► 08/17 - 08/24 (142)
► 08/10 - 08/17 (105)
► 08/03 - 08/10 (151)
► 07/27 - 08/03 (175)
► 07/20 - 07/27 (139)
► 07/13 - 07/20 (162)
► 07/06 - 07/13 (97)
► 06/29 - 07/06 (163)
► 06/22 - 06/29 (107)
► 06/15 - 06/22 (125)
► 06/08 - 06/15 (142)
► 06/01 - 06/08 (123)
► 05/25 - 06/01 (127)
► 05/18 - 05/25 (149)
► 05/11 - 05/18 (118)
► 04/27 - 05/04 (150)
► 04/20 - 04/27 (147)
► 04/13 - 04/20 (32)
► 04/06 - 04/13 (95)
► 03/30 - 04/06 (87)
► 03/16 - 03/23 (108)
► 03/09 - 03/16 (105)
► 03/02 - 03/09 (102)
► 02/23 - 03/02 (119)
► 02/02 - 02/09 (110)
► 01/26 - 02/02 (126)
► 01/19 - 01/26 (111)
► 01/12 - 01/19 (133)
► 01/05 - 01/12 (116)
► 2013 (2394)
► 12/15 - 12/22 (58)
► 10/20 - 10/27 (29)
► 09/29 - 10/06 (162)
► 09/22 - 09/29 (49)
► 09/15 - 09/22 (62)
► 09/08 - 09/15 (83)
► 09/01 - 09/08 (112)
► 08/25 - 09/01 (54)
► 08/11 - 08/18 (56)
► 03/31 - 04/07 (46)
► 03/17 - 03/24 (36)
► 03/10 - 03/17 (41)
► 03/03 - 03/10 (74)
► 02/24 - 03/03 (77)
► 02/10 - 02/17 (85)
► 02/03 - 02/10 (79)
► 01/27 - 02/03 (82)
► 01/20 - 01/27 (51)
► 01/13 - 01/20 (31)
► 2012 (3884)
► 12/23 - 12/30 (160)
► 12/16 - 12/23 (91)
► 10/28 - 11/04 (67)
► 10/14 - 10/21 (61)
► 09/23 - 09/30 (211)
► 09/16 - 09/23 (189)
► 09/09 - 09/16 (298)
► 09/02 - 09/09 (174)
► 08/19 - 08/26 (209)
► 08/12 - 08/19 (250)
► 08/05 - 08/12 (274)
► 07/29 - 08/05 (175)
► 07/22 - 07/29 (152)
► 07/15 - 07/22 (174)
► 07/08 - 07/15 (193)
► 07/01 - 07/08 (105)
► 05/27 - 06/03 (73)
► 05/13 - 05/20 (38)
► 04/15 - 04/22 (32)
► 04/01 - 04/08 (44)
► 03/25 - 04/01 (57)
သင်၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်စွက်ရန်
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေစာအုပ်